ज्ञानेन्द्र र हिमानीका विषयमा अहिलेसम्म नखुलेको गोप्य खबर बाहिरियो, अब पारसले के गर्लान् ज्ञानेन्द्रलाई ? - Arghakhanchi Saptahik
ज्ञानेन्द्र र हिमानीका विषयमा अहिलेसम्म नखुलेको गोप्य खबर बाहिरियो, अब पारसले के गर्लान् ज्ञानेन्द्रलाई ? ज्ञानेन्द्र र हिमानीका विषयमा अहिलेसम्म नखुलेको गोप्य खबर बाहिरियो, अब पारसले के गर्लान् ज्ञानेन्द्रलाई ? समाचार
लागुऔषधको कुलतले पारिवारिक जिम्मेवारीबाट पछि हटेका छोरा पार साथमा नरहेपनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रँग बुहारी हिमानी र तिनका लालाबाला निर्मल निवासमै छन् । तर ती बुहारी प्रति पनि पूर्व राजाले उति धेरै भर नभएको एउटा
आर्थिक कारोबारले बुझाएको छ ।
आफ्नो सम्पत्तिबाट नाति हृदयेन्द्र, नातिनीहरु कीर्तिका र पूर्णिकाको नाममा विभिन्न ठाउँमा लागनी गरेका उनले कुनै पनि लालाबालको संरक्षक तिनका बाबु–आमालाई बनाएका छैनन् ।
नेपालकै कानुनअनुसार पनि नाबालकमाथि पहिलो हक आमा र दोस्रो बाबुको लाग्छ । यसविपरित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पत्नी तथा उनीहरुकी हजुर आमा कोमललाई संरक्षक बनाएर गरेका विभिन्न वित्तीय लागनी मध्ये सिइडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको लगानी हो ।
उक्त फण्डको ६३० कित्ता अग्राधिकार शेयर ६३ हजारमा ९ वर्षीय हृदयेन्द्र,
१० वर्षीया पूर्णिका र ८ वर्षीया कृतिकाको नाममा खरिद गरेका हुन् ।
क्रम संख्या १६८ मा पूर्णिका, १६९ मा हृदयेन्द्र र १७० मा किर्तिकाको नाममा अग्राधिकार शेयरधनीमा सूचीकृत छ ।
र, ती प्रत्येक नाबालकको नाम मुन्तिर हातैले लेखिएको छ संरक्षक कोमल राज्यलक्ष्मी शाह ।